Madaxweyne ku xigeenka USA: Ilhaan meelna ugama bannaana guddiga arrimaha dibadda ee Kongreska - BBC News Somali
Image caption Ilhaan Cumar
"Mareykanka iyo Israa'il waxaa ka dhaxeeyo iskaashi soo jireen ah, marka cid kasta oo isku dayeyso iney carqaladeyso xiriirka soo jireenka ee labada dhinac ka dhaxeeya boos ugama bannaana inuu ka sii mid ahaado guddiga joogtada ee arrimaha dibadda ee Congres-ka." ayuu yiri
Xuquuqda Sawirka @VP @VP
Ilhaan Cumar ayaa aad loogu cambaareeyay kaddib markii ay 10-ka Fabraayo barteeda Twitter-ka ku qortay ereyo loo arkay Yahuud-Nacayb.
Iyadoo ka jawaabeyso su'aal Twitter-ka lagu weydiiyay oo ahayd cidda maalgelisa siyaasiyiinta taageerta Israa'iil, ayay Ilhaan tiri "AIPAC", oo ah urur u ololeeyo dalka Israa'iil oo ka dhisan Maraykanka.
Hadallada Ilhaan Cumar ee dhibaatada u soo jiiday
Ilhaan Cumar oo ka hadashay waxay isku seegeen madaxweyne Donald Trump
Hadalkaasi ayaa gudaha Mareykanka iyo Yuhuuddaba ka abuuray dhaleeceyn weyn, taas oo xitaa ay si weyn uga hadleen warbaahinta Israa'iil.
Image caption Dagaal afka ah ayaa ka dhex-socda Ilhaan Cumar iyo Donald Trump
Xisbiga Dimuqraadiga ayaa markiiba hindisay in arrintaasi go'aan laga soo saaro, balse warqado ay soo qoreen taageerayaasha Ilhaan ayaa sababay in xisbigu baddelo mawoqifkiisii, oo waxaa uu cambaareeyay wax kasta oo ku salaysan nacayb.
Maalin kaddib ayay Ilhaan sheegtay inay ka cudur-daaratay hadalkii ay tiri.
Image caption Hadallada Ilhaan Cumar oo hir siyaasadeed ku furay
Gabadha ka tirsan xildhibaannada aqalka koongareeska Mareykanka ee xisbiga Dimuqraaddiga, Ilhaan Cumar ayaa jawaab kulul u dirtay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence kadib markii uu dhaliilay hadal ay ka tiri xiisadaha Venezuela.
Lahaanshaha sawirka Rep. Ilhan Omar
Image caption Horay wuxuu dagaal kharaar uga dhaxeeyay Ilhaan Cumar iyo Donald Trump
"Haweenka midabka horay way u maqleen arrintan. intii uu dhihi lahaa 'fikirkaas waan kasoo horjeednaa' wuxuu yidhi 'Ma taqaanno waxa ay ka hadleyso. Waa inay na dareensiiyaan inaan tabaryar nahay. Nidaamka noocan ah wuxuu u maleynayaa in isbaddalka cimilada uu yahay ficil uu Shiinaha sameeyay", sidaas ayey Twitter-ka kusoo qortay Ilhaan.
Xuquuqda Sawirka @IlhanMN @IlhanMN
Galinkii hore ee isla maalintaas, Pence ayaa Ilhaan ku eedeeyay inaysan waxba ka ogeyn "waxa ay ka hadleyso", ka dib markii ay shaacisay hadallo u muuqday inay mas'uuliyadda xiisadaha Venezuela dusha ka saareyso maamulka Trump, maadaama sida ay sheegtay ay si qallafsan ula dhaqmeen waddankaas ayna cunaqabateyno saareen.
Mr Pence ayaa dhankiisa mas'uuliyadda dhibaatada dalkaas ku eedeeyay madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro.
"Ma aha oo kaliya in aan ka badbaaday coalad. Haddii aan maleeshiyaadka ka badabaday waxaan hubaa in aan ka badbaadi karo dadkan," ayay tiri Ilhaan Cumar.
"Balse sababtu waxaa weeye meel kastaa oo aan tagaba, waxaan hubaa in aan wada soconno dhammaantiin oo aan gacmaha is-haysanno."
Ilhan Cumar: '' Warbaahinta Maraykanka ayaa war ka dhigata inaan dagaal ka wado Maraykanka mana sheegaan waxyaabaha...
Posted by BBC News Somali on Saturday, 27 April 2019
"Khilaafka aniga iyo madaxweynaha [Trump] wax cusub ma ahan, waxaan aaminsanahay in khilaaf weyn uu ka dhaxeeyay isaga iyo dadka Muslimiinta ah, khilaaf weyn uu ka dhaxeeyay isaga iyo dadka qaxootiga waddankan ku ah, khilaaf weyn uu ka dhaxeeyay isaga iyo dadka madowga ah, khilaaf weyn uu ka dhaxeeyay isaga iyo dadka dumarka ah."
Ilhaan waxa ay sheegtay in iyada ay mas'uuliyad gaar ah ka saaran tahay dadkaasi oo waxa ay tiri "aniga waxaan ahay qof dadkaas oo dhan wadamatalo, marka aniga iyo asaga inaan isku dhacno waa wax mar hore soo bilowday."